ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး - Union Attorney General's Office
၁၈၂၆ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပထမစစ်ပွဲပြီးချိန်မှစ၍ ဗြိတိသျှတို့သည် ယင်းတို့၏အင်္ဂလိပ်ရိုးရာဥပဒေစနစ်ကို ပြုပြင်ထားသည့် ဥပဒေစနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ အစိုးရရှေ့နေချုပ်တစ်ဦး၊ အစိုးရ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှုခင်းများနှင့် တရားမမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါ ၁၉၄၇ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၄၈ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ် အက်ဥပဒေတို့အရ ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရက နိုင်ငံတော်တာဝန်များကို ဆက်ခံဆောင်ရွက်သည့်အခါ ရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်အထိ ရှေ့နေချုပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းများနှင့်တရားမမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရကို ဥပဒေအကြံပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ယခင် တည်ရှိခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကိုဖျက်သိမ်းသည့်အခါ ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး၊ အမှုလိုက်ခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဥပဒေဘာသာပြန်ခြင်း တာဝန်များဆောင်ရွက်ရန် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ခုနှစ် ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ဗဟိုဥပဒေရုံး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့က နိုင်ငံတော်တာဝန်များ ရယူသည့်အခါ ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ ရှေ့နေချုပ် ဥပဒေကိုပြဌာန်းပြီး၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်စု(ခရိုင်) ဥပဒေရုံးများ နှင့်မြို့နယ်ဥပဒေ ရုံးများ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးခွဲ(မန္တလေး)၊ ပြည်နယ် ဥပဒေရုံးခွဲ ၂ရုံးနှင့် တိုင်းဥပဒေရုံးခွဲ ၁ရုံးတို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ် ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေသည် အချိန်အခါနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သမိုင်းအတွေ့...
Vision, Mission and Mandate of UAGO
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ကောင်းမွန်မျှတသော ဥပဒေများပြဌာန်းနိုင်စေရေး၊ ပြည်တွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဥပဒေအကြံညာဏ်ပေး လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမမှု၊ ပြစ်မှုများတွင် မျှတသော တရားစီရင်ရေးရရှိစေရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် တရားမျှတမှုကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (Justice Sector Reform) တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် တရားမျှတမှု၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကို အခြေပြုပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဥပဒေအရ ရပိုင်ခွင့်များ၊ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ပြည်သူများလေးစားရသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် ဒေသတွင်း အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော စံပြ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
Feb 14, 2018 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အလယ်အလတ်အဆင့် ဥပဒေအရာရှိများ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်...
Feb 02, 2018 |0comment
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏(၅) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ၏...
Feb 01, 2018 |0comment
ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့ (DFID) မှ အကြံပေးအရာရှိအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးဝင်းမြင့် သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့မှ အကြံပေးအရာရှိ Mr....
Jan 17, 2018 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့မှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Scort Marciel ၊ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E...
Dec 27, 2017 |0comment
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇) ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပဆောင်ရွက်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇) ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀...
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆီသို့ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅- ၂၀၁၉)
မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅- ၂၀၁၉) ၏ ပထမဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာ
Copyright © 2018 Union Attorney General's Office. Powered by Kyaw Kyaw Linn